नेदरल्याण्ड र जापान विजयी, इटली- पाराग्वे बराबरी/आत्माघाती गोल गर्ने हाँसे/एसियाबाट अर्को मुलुको जित |
नेदरल्याण्ड र जापान विजयी, इटली- पाराग्वे बराबरी/आत्माघाती गोल गर्ने हाँसे/एसियाबाट अर्को मुलुको जित
Posted on June 15, 2010 by Yonepal
दक्षिणअफ्रीकामा जारी विश्वकप फुटबल अन्तर्गत जुन १४ मा भएको प्रतियोगितामा नेदरल्याण्ड र जापान विजयी भएका छन् भने इटली र पाराग्वेबीचको खेल बराबरीमा सकियो।
आत्माघाती गोल गरेर पनि खेलाडी हाँसे
दक्षिण अफ्रीकाको जोहोन्सवर्गस्थित सकर सीटी रंगशालामा सोमबार भएको पहिलो खेलमा समूह ‘ई’ मा रहेको डेनमार्कलाई २ शून्य गोलले पराजित गर्दै नेदरल्यनण्डले महत्वपुर्ण ३ अकं जाडेको छ।
निकै प्रतिस्पर्धात्मक रहेको ति दुई देशबीचको खेल पहिलो हाल्पसम्म कुनै देशको तर्फबाट गोल हुन सकेको थिएन। दुवैको खेल आक्रमक नै थियो। नेदरल्याण्डका खेलाडी नर्सी नं.९ का रोविन भान पसिर्कोको लामो प्रहारलाई डेनमार्कका १५ नं.जर्सीका खेलाडी सिमाने पलसनले हेडमार्फत बचाउन खोज्दा आफ्नै साथी ४ नं.जर्सीका अग्गेरको ढाडमा लागेर आत्माघाती गोल भएको थियो। गोल पश्चात डेनमार्कका खेलाडी सिमोन पलसन भने मुस्कुराएका थिए ।
नेदरल्याण्डले त्यसपछि डेनमार्कलाई केही दबाबमा राख्यो। डेनमार्कले धेरै पटक डि बस्कभित्र बल पुर्‍याए पनि कुनै चमत्कार गर्न सकेन। केही उत्कृष्ट प्रहार पनि नेदरल्याण्डका गोल रक्षकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे।
दोस्रो हाल्फमा आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएको नेदरल्याण्डले खेलको अन्तिमतिर अर्को गोल गर्‍यो। नेदरल्याण्डका जर्सी नं.७ का खेलाडी क्युटले खेलको ८५ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
खेल अवधिभर नेदरल्याण्डले १३ पटक फल गरेको थियो भने डेनमार्कले २० पटक फल गरेको थियो। तर डेनमार्कले मात्र एउटा पहेलो कार्ड पाएको थियो। नेदरल्याण्डले दुई वटा पहेलो कार्ड पायो। कार्ड पाउने खेलाडीहरुमा नेदरल्याण्डका तर्फबाट ८ नं.जर्सीका जंग र ९ नं.जर्सीका खेलाडी पर्सी तथा डेनमार्कका ३ नं.जर्सीका केजेइयर रहेका छन्। खेल रातो कार्ड विहीन भएको थियो।
नेदरल्याण्ड र डेनमार्कबीच भएको खेलमा म्यान अफ दी म्याद नेदरल्याण्डका मिड फिल्डर १० नं.जर्सीका खेलाडी स्नेइज्डर भए ।
होण्डाले गरे जापानको पक्षमा निर्णायक गोल, उनी भए म्यान अफ दी म्याच
विश्वकप फुटबल अन्तर्गत १४ जुन सोमबार भएको दोस्रो खेलमा जापानले आफ्नो जित सुनिश्चित बनाएको छ। जापानले अफ्रीकन राष्ट्र क्यामरुनविरुद्ध १ गोल गरेर ३ अंक बटुलेको छ।
एसियाली राष्ट्र जापानले क्यामरुनको विरुद्ध खेलको ३८ औं मिनेटमा जर्सी नं. १८ का केसुके होण्डाले गोल गरे । उनको गोल नै निर्णायक बन्यो । जापानको मिडफिल्डर होण्डा नै म्यानअफ दी म्याच भए । खेल अवधिभर क्यामरुनले ५५ फल खेल्यो भने जापानले ४५ । दुवै राष्ट्रका एक एक खेलाडीले पहलो कार्डको सामना गरेका थिए ।
जापानका २ नं.जर्सीका खेलाडी अबेले र क्यामरुनका ३ नं.जर्सीका खेलाडी एनकोउलोउले पहेलो कार्ड पाएका थिए । नेपालीहरुले एसियाको राष्ट्र भएकै नाताले पनि जापानलाई सपोर्ट गरेका थिए । जापान उन्नाइसौं विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा ३ अंक जोड्ने दोस्रो राष्ट्र हो। यसअघि दक्षिण कोरियाले पनि एक खेल जितिसकेको छ। दक्षिण कोरियालो ग्रीसलाई २ गोलले हराएको थियो।
पाराग्वे र इटलीबीचको खेल बराबरी
विश्वक फुटबल प्रतियोगिताको ग्रुप एफमा रहेका राष्ट्रमध्ये इटली र पाराग्वेबीच दक्षिण अफ्रीकाको केप टाउनस्थित ग्रीन पोइन्ट स्टेडियममा भएको खेलमा पाराग्वे र इटलीले एक/एक गोल गरेका छन्।
विश्वकप फुटबलको दाबेदार राष्ट्र मानिएको इटलीलाई फ्री किकमा पाएको मौकाको सदुपयोग गर्दै इटलीविरुद्ध गोल गरेको थियो। खेलको ३९ औं मिनेटमा पाराग्वेका २१ नं.जर्सी खेलाडी एनटोलिन अल्काराजले फ्री किकको सदुपयोग गर्दै गोल गरेको हुन्।
पहिलो हाल्फमा गोल खाएको इटलीले दोस्रो हाल्फमा पाराग्वेलाई गोल फर्काएको हो। खेलको ६३ औं मिनेटमा इटलीका जर्सी नं. ६ का खेलाडी डेनेइल डि रोसीले गोल गरेर खेललाई बराबरी बनाए ।
खेलको ५४ औं मिनेटमा इटलीका भेराको पासलाई पेपेले सदुपयोग गर्न सकेनन्। यद्यपि उनको प्रयास भने प्रसंशनीय थियो। खेल अवधिभरी दुवै देशले एक/एक पहलो कार्ड पाएका थिए । पाराग्वेका डिफेन्डर अल्काराज म्यान अफ दी म्याच भए । उनले पाराग्वेको लागि एक गोल गरेका थिए । बराबरी खेलेका पाराग्वे र इटलीले एक/एक अंक जोडेका छन्।
Filed under: SPORTS | Tagged: विश्वकप फुटबल world cup, विश्वकप world cup |
« स्लोभानिया, घाना र जर्मनी विजयी, अष्ट्रेलियाले खायो चार गोल ब्राजिलले चाख्यो कोरियाको लज्जास्पद गोल/ रोनाल्डोलाई पहेलो कार्ड/स्लोभाकियालाई धक्का »